माइकोप्रोटीनको अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्याक्शन - हिल्सचर अल्ट्रासाउन्ड टेक्नोलोजी
माईकोप्रोटीन फ consumption्गस-व्युत्पन्न प्रोटीन हो जुन मानव खपतका लागि उत्पादन गरिन्छ, जुन मुख्यतया मासु विकल्प वा “नक्कली मासु” तयार पार्न प्रयोग गरिन्छ। अल्ट्रासोनिक निकासी र होमोजाइनेजेशन छोटो प्रसंस्करण समयमा धेरै उच्च प्रोटीन उत्पादन प्राप्त गर्न फ the्ग्रसबाट माइकोप्रोटीन जारी गर्न अत्यधिक कुशल विधि हो।
माईकोप्रोटीन फgi्गलमा उपस्थित एकल सेल प्रोटीन हो। प्रोटीन र फाइबरको एक उच्च मात्रा प्रदान गर्दै, माइकोप्रोटीन पोषण मूल्यवान एमिनो एसिडहरूको स्वस्थ र दिगो स्रोतको रूपमा मानिन्छ। माइकोप्रोटीनमा सामान्यतया करीव% 45% प्रोटीन र २ dry% फाइबर हुन्छ ड्राई वेट द्वारा। माईकोप्रोटीन अत्यावश्यक अमीनो एसिडमा समृद्ध छ र लगभग रचनाको साथ। %१% कुल प्रोटीन यसले spirulina लाई समान प्रोटीन सामग्री प्रदान गर्दछ। यसले माईकोप्रोटीनलाई शाकाहारी र शाकाहारीहरूका लागि रोचक प्रोटीन स्रोत बनाउँदछ। माईकोप्रोटीन फाइबरमा धनी छ। यसको फाइबर सामग्री लगभग हुन्छ। एक तिहाइ chitin (N-acetylglucosamine) र दुई तिहाई gl- ग्लूकान्स (१,3-ग्लुकान र १,6- ग्लूकन)। उच्च प्रोटीन र फाइबर सामग्री प्रस्ताव गर्दै, माइकोप्रोटीन एक स्वस्थ र दिगो खाद्यान्न स्रोत हो।
(cf. Finnigan एट अल। २०१))
अल्ट्रासोनिक माइकोप्रोटीन एक्स्ट्रक्शन
माईकोप्रोटीन उत्पादन गर्नका लागि, खाद्य फg्गस प्रजातिहरू बायोरिएक्टर्समा हुर्काइन्छन् र संस्कृत हुन्छन्। यसको मतलब प्रोटीन फg्गस प्रजातिहरूमा फसेको छ, जस्तै: फुसारीयम भेनेटम। माईकोप्रोटीन जारी गर्नका लागि, एक शक्तिशाली सेल अवरोध र उत्खनन प्रविधिको आवश्यक छ, जसले फg्गलस लाईस गर्छ। लीसिसको बखत, सूक्ष्मजीवको कोषको पर्खालहरू विघटन हुन्छ र टुक्रा टुक्रा हुन्छन् ताकि ईन्ट्रासेलुलर सामग्री जस्तै प्रोटीन, लिपिड र अन्य पोषकहरू बाहिर निस्कन्छन्। Ultrasonication कोशिका र ऊतक विघ्न र मूल्यवान यौगिकहरु निकाल्न खाद्य उत्पादन र बायोटेक्नोलजीमा प्रयोग गरीएको एक राम्रो प्रविधिको हो। यसबाहेक, अल्ट्रासोनिकेसनले हासिल गरेको समान समरूपताले माईकोप्रोटीनलाई विभिन्न बनावट, स्वादहरू, र प्रयोगहरू सहित मासु एनालग, प्रोटीनयुक्त स्नैक्स, दुग्ध रहित दुध विकल्प र डेसर्टहरू सहित नयाँ खाद्य पदार्थहरूमा परिवर्तन गर्न सजिलो बनाउँदछ।
पिसेको साथ Sonication द्वारा Fusarium भेनेटुमबाट प्रोटीनको काइनेटिक्स रिलीज हुन्छ
स्रोत: प्रकाश एट अल। २०१।
मामला अध्ययन – अल्ट्रासोनिक माइकोप्रोटीन रिलीज
प्रकाश एट अल। (२०१ 2014) फुसारीयम भेनेनेटमबाट माइको प्रोटिन रिलीजमा अल्ट्रासोनिकेसनका प्रभावहरूको अनुसन्धान गर्‍यो। उनीहरूले ०..680० मिनेटको अधिकतम प्रोटीन रिलीज दर K हासिल गर्‍यो जुन ractedμ०μg निकालेको माइकोप्रोटीनको साथ।
फ्यूसारियम भेनेटमको प्रोटीन रिलीजमा पिसाउने विधिसँग Sonication को प्रभाव
अल्ट्रासोनिक माईकोप्रोटीन एक्स्ट्रक्शनका फाइदाहरू
उच्च उपज / पूर्ण निकासी
अल्ट्रासोनिक निकासी – कार्य सिद्धान्त र लाभहरू
अल्ट्रासोनिक निकासी अकौस्टिक (अल्ट्रासोनिक) cavitation को घटना मा आधारित छ। जब शक्तिशाली अल्ट्रासाउंड तरंगहरू तरल वा घोलमा जोडिन्छ, वैकल्पिक उच्च-दबाव र कम-चक्र चक्र संकुचन हुन्छ र मध्यममा तरल सिर्जना मिनेट भ्याकुम बुलबुले विस्तार गर्दछ। ती शून्य बबलहरू धेरै उच्च-प्रेशर / कम-चक्रको चक्रमा बढ्न थाल्छन् जब सम्म तिनीहरू एक बिन्दुमा पुग्दैनन् जब ग्यासको बुलबुले कुनै पनि थप ऊर्जा लिन सक्दैन। अधिकतम वृद्धि को विन्दु मा, बुलबुले एक उच्च दबाव चक्र को दौरान हिंसात्मक उत्तेजित गर्दछ। बबल प्रकोपको बखत, स्थानीय रूपमा चरम अवस्था जस्तै धेरै उच्च तापक्रम, दबाबहरू र सान्दर्भिक दबाव र तापमान भिन्नताका साथै २m० मी / सेकेन्ड सम्म तरल जेटहरू देखा पर्दछ। यी तीव्र शक्तिहरूले सेल भित्ताहरू छिर्न र भत्काउँछन् र सेल भित्री र वरपरको तरलको बीचमा सामूहिक स्थानान्तरणलाई बढावा दिन्छन्। इन्ट्रासेल्युलर सामग्री जस्तै प्रोटीन, लिपिड र अन्य बायोएक्टिभ यौगिकहरू तरलमा स्थानान्तरण हुन्छन् जहाँबाट सजीलो बगैंचामा प्रवाह गर्न सकिन्छ।
अल्ट्रासोनिक एक्स्ट्र्यासनको फाइदा
अल्ट्रासोनिक रूपमा सहयोगी निकासी (UAE) इन्ट्रासेल्युलर सामग्री जस्तै प्रोटीन, लिपिड, र बायोएक्टिभ पदार्थहरू (उदाहरणका लागि भिटामिन र पोलीफेनल्स) छुट्याउन र अलग गर्नका लागि एक अत्यधिक कुशल टेक्निक हो। Sonication एक प्रक्रिया तीव्रता हो, जसले सेल आन्तरिक र तरलको बीचमा सामूहिक स्थानान्तरण बढाउँछ। अल्ट्रासोनिक निकासीको परिणाम उच्च उत्पादन, कम प्रसंस्करण समय, उत्कृष्ट निकासी गुणस्तर, र कम प्रशोधन लागत र कम ऊर्जा खपतको परिणाम दिन्छ।
माइकोप्रोटीन प्रोसेसिंगको लागि अल्ट्रासोनिक होमोजिनाइजरहरू
अल्ट्रासोनिक सेल अवरोधकहरू र एक्स्ट्रक्टरहरू खाद्य प्रसंस्करण सुविधाहरूमा राम्रोसँग स्थापित उपकरणहरू छन्। काभिटेशनल उच्च-कतराहरू बल प्रदान गर्ने, अल्ट्रासोनिकेटरहरू बिरूवा पदार्थबाट जैवक्रियात्मक यौगिकहरू अलग गर्न र दुई वा अधिक चरण एक समान मिश्रणमा एकरूप गर्न प्रयोग गरिन्छ।
हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सले उच्च प्रदर्शन अल्ट्रासोनिकेटर्सको ल्याबबाट औद्योगिक आकारको एक विस्तृत पोर्टफोलियो प्रदान गर्दछ।
एक्स्ट्रक्ट्स, जुन खाना वा फार्मास्यूटिकल्समा प्रयोग गरिन्छ, राम्रो उत्पादन प्रक्टिस (GMP) अनुसार र मानक प्रक्रियागत विनिर्देशहरूको अन्तर्गत उत्पादन गरिनु पर्दछ। हिल्सचर अल्ट्रासोनिक्सको डिजिटल निष्कर्षण प्रणाली बुद्धिमान सफ्टवेयरको साथ आउँदछ, जसले सोनीक प्रक्रिया ठीकसँग सेट गर्न र नियन्त्रण गर्न सजिलो बनाउँदछ। स्वचालित डेटा रेकर्डिले सबै अल्ट्रासोनिक प्रक्रिया प्यारामिटरहरू लेख्छन् जस्तै अल्ट्रासाउंड ऊर्जा (कुल र शुद्ध उर्जा), आयाम, तापमान, दबाव (जब अस्थायी र प्रेशर सेन्सरहरू माउन्ट गरिन्छ) बिल्ट-इन SD कार्डमा मिति र समय टिकटको साथ। यसले तपाइँलाई प्रत्येक अल्ट्रासोनिक रूपमा प्रक्रिया गरिएको धेरै परिमार्जन गर्न अनुमति दिन्छ। एकै साथ, पुनउत्पादकता र लगातार उच्च उत्पाद गुणवत्ता सुनिश्चित गरिएको छ।
माइकोप्रोटीन भनेको के हो?
माईकोप्रोटीन एक तथाकथित एकल-सेल प्रोटीन हो, जसको अर्थ एक एकल कोषबाट उत्पन्न भएको हो। माईकोप्रोटीनको लागि, एकल सेल जीव एक फg्गस हो। त्यसकारण, माइकोप्रोटीन फंगल प्रोटीनको रूपमा पनि चिनिन्छ। अक्षर "मायको” ग्रीक शब्द "मायकेस" बाट आएको हो, जसको अर्थ फg्गलस हो।
माईकोप्रोटीनको उत्पादनको लागि फुसारीयम भेनेटम सामान्यतया प्रयोग हुने फg्गस हो। यो Fusarium जीनस को एक microfungus हो र एक उच्च प्रोटीन सामग्री प्रदान गर्दछ।
माईकोप्रोटीनलाई व्यवसायिक रूपमा उत्पादन गर्न, फ sp्गल स्पोरहरू ग्लुकोज र अन्य पोषक तत्वहरूको शोरबामा संवर्धित हुन्छन् र किण्वित हुन्छन्। त्यसपछिको प्रशोधन चरणहरूमा स्टीमिंग, द्रुतशीतन र आरएनए-कम फ fun्गाल बायोमासको फ्रिजि involve समावेश छ। अन्तमा, एक उच्च प्रोटीन र उच्च फाइबर द्रव्यमान प्राप्त हुन्छ, जुन विभिन्न खाद्य उत्पादनहरू जस्तै मांस विकल्पहरू वा खाद्य additives मा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। माईकोप्रोटीन मुख्यतया तथाकथित "नकली मासु" उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन मासु विकल्प वा मासु एनालग हुन्।